Farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay dilkii Eng Yariisow | Keydmedia
Farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay dilkii Eng Yariisow
Kiisa dilka Eng Yariisow ayaa la iska dabooley, kadib markii uu lugaha la galay madax katirsan dowladda, oo fududeeyay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir Jul 24, 2019 .
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu horeysay meel fagaaro ah uga hadlay kiiska dilkii Eng Yariisow xili shacabka Soomaaliyeed mudo dheer sugayeen inay dowladda soo bandhigto natiijada baaritaanka qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda xuska kowda Juulyo, ayaa sheegay in dilkii Eng Yariisow uu hakiyay dhowr bilood howlo badan oo dib u dhiska xaruumaha dowladda ee ku yaalla magaaladda Muqdisho, sida Tiyaatarka, Madxafka Qaranka, Stadium Muqdisho iyo wadooyin.
Madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin tallaabada ay dowladda qaadey kadib dilkii Eng Yariisow, balse wuxuu qiray inay dowladda u dhutisay kaalintiisii muuqatey ee uu ka qaadnayay mashruuca Is-xilqaan. Al-Shabaab ayaa la rumeysan yahay in aysan u suurtageli lahayn in ay disho duqii Caasimadda, hadii aysan ka heli lahayn caawinaad dad katirsan DF.
Eng Yariisow iyo shaqsiyaad kale oo bulshadda indho u ahaa ayaa dhiigooda meel cidla ah ku baxay, iyadoo aan jirin cid loo qabtey, mana helin ehelkooda wax cadaalad ah. Dil kasta ama qarax kasta oo dhaca, dowladda waxaa caado u ah waan baareynaa, oo aan waxba ka jirin si dadka loogu qanciyo.